Soo dejisan Clean Master 1.0 – Windows – Vessoft
Master nadiif ah – software ah oo loogu talagalay in ay nadiif ah iyo tayadoodii nidaamka. Software The kuu ogolaanayaa inaad nadiifiso diiwaanka, nidaamka ama web khasnado iyo faylasha hadha marka uninstall ee software. Nadiifi Master ay qabato si toos ah laga baarayo iyo qaybiyaa ah xubno ka helay kooxo la soo bandhigay macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan faylasha ah. Software wuxuu ka kooban yahay qaybo dhisay-in in bixisaa scan nidaamka on jadwal. Master nadiifi waxa uu leeyahay dareen leh oo u fududahay in la isticmaalo interface.
Daahiriyo iyo optimizes nidaamka
Muujiya warbixin faahfaahsan oo ku saabsan faylasha ah
Waxaa la dhisay-in scheduler
Interface fudud iyo dareen leh
Clean Master Software la xiriira:
English, Français, Español, Deutsch... Glary Utilities 5.62 Standard iyo Pro
العربية, English, Español, Português... Auslogics Registry Cleaner 6
العربية, English, Українська, Français... Cool Reader 3.3.61
العربية, English, Українська, Français... Google Drive 1.23.9648.8824
العربية, English, Українська, Français... GoodSync 9.9.61.1 Standard iyo Portable